QC Ukuze PCB - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Umklamo Imithetho Hlola (DRC) kuyisinyathelo esibalulekile kakhulu ukulawula PCB izinga. Uma sithola i-oda entsha kusuka ikhasimende, sizosebenzisa ithuluzi okuzenzakalelayo ukuqinisekisa ukuthi isakhiwo akanayo ukubekwa ethize, umzila noma ezinye addressable isakhiwo amaphutha.?
Lokhu isheke DRC zithintana netlist nokuma ngokumelene izingqinamba PCB design kanye nemithetho. It uhlola ingxenye ukubekwa ebhodini futhi ukulandelela ewachitha ubuqotho ngoba izingxenye zidlulela, izikhonkwane untraced, ayilungile ungqimba ukubekwa mani ukuthi kukhona LAPHO simiselwe trace ububanzi umzila kanye clearances.?We futhi wenze isheke yokukhiqiza umthetho ukuze uqiniseke ukuthi umklamo PCB kuyinto manufacturable. Uma sithola ukuthi noma yimaphi amaphutha sizobe uthole ukuxhumana nekhasimende.
Prototype oda : Sinikeza Flying-Ucwaningo E-Hlola ivolumu prototype oda elincane. Wesifunda lakho ebhodini (PCB) iyenziwa ngokusebenzisa kudivayisi ngokuthi i Flying-Ucwaningo E-lomhloli. I Flying Uphenyo abahloli sisebenzisa ube ambalwa imikhawulo ekufinyeleleni, akudingi zalapho ukuhlolwa, futhi bangahlola amabhodi nenombolo cishe angenamkhawulo amanetha. I Tester izohlola izifunda okufutshane, izifunda ovulekile futhi uqiniseke amanetha we PCB senza kuyafana amanetha in design yakho. Ngemva ukuhlolwa kuqediwe, behluleka ngesilinganiso amabhodi akho ayoba ngaphansi kuka-1%.?
Ama-oda Production : Sisebenzisa Testing zalapho ukuhlola oda zokukhiqiza. A embhedeni wezipikili umhloli kuyinto bendabuko electronic test lwemidlalo esesikhundleni izikhonkwane eziningi ifakwe izimbobo i Epoxy phenolic ingilazi indwangu ishidi laminated (G-10) lapho ahambelana usebenzisa tooling izikhonkwane ukuze baxhumane nalowo test amaphuzu ku isiliphu wesifunda ibhodi.
Lo mdlalo iqukethe uxhaxha encane, entwasahlobo-ukulayishwa Pogo izikhonkwane; ngamunye Pogo pin kwenza umuntu axhumane nomunye engeyokuqala ku busebenze we-DUT (idivayisi ngaphansi kovivinyo). Ngokucindezela-DUT phansi ngokumelene embhedeni izinzipho, contact okunokwethenjelwa kungaba ngokushesha futhi kanyekanye enziwe namakhulu noma ngisho izinkulungwane amaphuzu test umuntu othile ngaphakathi busebenze we-DUT.
I Tester izohlola izifunda okufutshane, izifunda evulekile, futhi uqiniseke ukuthi amanetha we PCB senza kuyafana amanetha in design yakho. Ngemva ukuhlolwa kuqediwe, behluleka ngesilinganiso amabhodi akho ayoba ngaphansi kuka 0.1%.
Aoi (Automated ukuhlolwa optical)
Sisebenzisa i Aoi ukuhlola izingqimba kwangaphakathi multi-izingqimba PCB. Aoi zibukeke aqalaze kobuso PCB. Ibhodi luthungelwa imithombo eminingana ukukhanya okuphawulwe isithwebuli noma inombolo ephezulu definition amakhamera. Lokhu kunika amandla ukuqapha zonke izindawo ebhodini.
Aoi okwesikhathi angenalutho PCB ibhodi wokuhlola ukuthola lezi zici:
* Line nobubanzi ukwephulwa
* Ukwephulwa Isikhala
* Ethusi okweqile
* Kulahleke pads. ? Okungukuthi isici kufanele kube ebhodini sishoda
* Shorts izifunda
* Sika iminonjana noma pads
* Hole zokugwema ukuphuka. (Breakout)? Okungukuthi umgodi yamba (nge) ingaphandle kokwehla yayo pad?
Lokhu kuhlolwa ezithembeke kakhulu futhi kuyaphindeka kuka inhlukano wokuhlola ezibukwayo.
Singabantu ISO 9001: 2008 eqinisekisiwe. Futhi thina chaza kafushane ukulawula izinga yethu uhlelo njengoba enjalo :?
* Umgomo wethu izinga isitatimende esisemthethweni kubaphathi bethu, kuhlobene ibhizinisi futhi icebo lokumaketha yethu futhi asinike lokho esikudingayo ikhasimende. Inqubomgomo yethu izinga siqondwa futhi kulandelwe kuwo wonke amazinga futhi yibo bonke abasebenzi. Abasebenzi bethu izosebenzisa Izinjongo esilinganisekayo usebenzela kuyo.
* Yonke idatha Ukulawula ikhwalithi kulotshwe. Amarekhodi sizobonisa indlela nalapho izinto zokusetshenziswa kanye nemikhiqizo okucutshungulwe, lokhu ukuvumela imikhiqizo nezinkinga kungenzeka kwasuka umthombo. Uhlelo lwethu lokulawula izinga njalo abuyekezwa futhi kulinganiselwa conformance nokuphumelela kwaleso sembatho.
* Uhlelo lwethu lokulawula izinga ilandisa nezidingo zamakhasimende kanye kudala uhlelo namakhasimende mayelana ulwazi lomkhiqizo, imibuzo, izivumelwano, ama-oda, impendulo izikhalazo.
* Sikhuluma njalo ubuyekeze ukusebenza lokulawula izinga ohlelweni lwethu ngokusebenzisa ukubalwa kwezimali kwangaphakathi futhi imihlangano. Sinquma yini noma cha uhlelo izinga isebenza futhi yini ingathuthukisa kuphi. Sizokwenza ukubhekana nezinkinga esidlule futhi izinkinga ezingaba khona. Uhlelo lwethu igcina amarekhodi misebenzi nezinqumo okuholela, futhi uqaphe ukusebenza kwabo.
* We bodokotela nezinqubo ekubhekaneni sangempela abangaba non-conformances (izinkinga ezifaka abahlinzeki noma amakhasimende, noma izinkinga zangaphakathi). Uhlelo lwethu Iqinisekisa ukuthi wonke umkhiqizo (s) yehliselwa "OKUBI" kuthiwa yedwa nokuthi akekho ongasisebenzisa umkhiqizo ezimbi kuze sikwazi ukuthola lokho ukwenzani wathi umkhiqizo ezimbi, Siyofuna futhi ukubhekana imbangela yenkinga ( s) bese ugcine amarekhodi ukuze uwasebenzise njengasemuva ithuluzi nokwenza ngcono uhlelo lwethu.
Imikhiqizo yethu athobele UL ukuphepha isitifiketi 94V-0. Zonke PCB zethu ukuhlangabezana ukukala ilangabi 94V-0 ukuzinqumela futhi zanelise zonke izidingo UL. Isilinganiso ilangabi ngayinye UL 94 uchaza polymeric ukumelana ingxenye ka- nomlilo. izilinganiso ejwayelekile PCB ezibonakalayo 94V-1 noma kangcono. The ephansi inombolo, ayanda isilinganiso ilangabi (isib, 94V-0 has a isilinganiso ephakeme kunaleyo 94V-1).
Thina UL eqinisekisiwe kanye nenkampani ilogo usukela emuva UL ka- abakhiqizi PCB ogunyaziwe uhlu. Ukuze agunyazwe kulesi sigaba, umuntu owakha PCB kukhonjelwe ezimele UL ukuhlolwa of senqubo yokukhiqiza yayo nangezinto zokwakha.
I Okuvumelekile enoBungozi Directive noma RoHS yamukelwa Februwari 2003 yi-European Union. Lesi siqondiso RoHS ziqale ngomhlaka 1 Julayi 2006, futhi kuyadingeka ukuze iphoqelelwe futhi babe umthetho esimweni ilungu ngalinye. Lesi siqondiso evumela ukusetshenziswa izinto eziyisithupha enobungozi enkulu ekwakhekeni izinhlobo ezahlukene zikagesi kagesi kanye.
Kusukela 1 July 2006 zikagesi neze- elekthronikhi owethulwa ungene Europe emakethe akumele kuqukethe phambili, mercury cadmium, hexavalent chromium, noma ilangabi retardants biphenyl polybromide, noma polybromide diphenyl ether.
Zonke phambili finishings yethu khulula: Ukuhola HAL khulula, Babecwiliswa esiliva, ENIG futhi osp nke ihambisane nezidingo RoHS.